Fiparitahan’ny tontolon’ny bilaogy Kenyana · Global Voices teny Malagasy
Fiparitahan'ny tontolon'ny bilaogy Kenyana
Voadika ny 17 Oktobra 2018 9:37 GMT
Mitohy amin'ity herinandro ity ny tantara ratsin'nyy kolikoly Anglo Leasing, azo jerena ao amin'ny kenyaunlimited avy amin'i Mshairi sy Mentalacrobatics ny lahatsary (dosie WMV 34MB) notontosain'ny BBC, ary azo jerena ao amin'ny Bittorent ihany koa noho i Maitha. Ahitana ny resadresaka nifanaovana tamin'i John Githongo, tompon'andrakitra ambony teo aloha izay miady amin'ny kolikoly ao amin'ny governemantan'i Kenya, tamin'i Sir Edward Clay, mpiandraikitra Ambony Britanika teo aloha, tamin'i Mr. Joseph Muchemi, tamin'Atoa Hillary Benn sekreteram-panjakan'ny Fanjakana Mitanmbatra misahana ny fampivoarana iraisam-pirenena, ny lahatsary. Misy ny fandraketam-peo nataon'Atoa Githongo momba ny kabinetran'ny minisitra Kiraitu Murungi, izay niezaka ny hisompatra ny asa nataon'i John Githongo tamin'ny alalan'ny fampidirana azy anaty lisitra mainty. Jereo izany raha te hahita ny haavon'ny kolikoly mahasaringotra an'i Kenya. Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, nolavin'Atoa Murungi ny fahamarinan'ny fandraketam-peo, raha nanamafy kosa ny mpampanoa lalàna teo aloha, Atoa. Murgor fa tena feon'Atoa. Murungi izany ary mifanaraka amin'ny fahazarany manakana ireo fanadihadiana manohitra ny kolikoly..[tao amin'ny Nation Media - fisoratana anarana maimaim-poana]
Mihevitra i Ntwiga fa “milalao amin'ny zava-misy Atoa Murungi” ary nametraka fanontaniana sasantsasany izay mila valiany mba “hamahàna ireo olana atrehina “
+ Nandray anjara tamin'ny fandrobana nataon'ireo vahoaka Kenyana izay efa nisy sy mbola mitohy ve ianao sa tsia? Raha eny, dia mitsangàna ary atreho izany.
+ Raha tsy nandray anjara tamin'ny fandrobana sy ny kolikoly goavana ianao, dia miezaha mampiseho porofo amin'ny vokatr'izany. Raha tsy manana porofo ianao, dia lazao izany ary lazao fa tsy manan-tsiny ianao. Milaza ny lalàna Kenyana fa tsy manan-tsiny ianao mandrapanaporofoana fa meloka.
Kenyanpundit manamarika fa any amin'ny tsirairay ny fifantohana amin'izao fotoana izao, ​​kanefa misy ny tambajotran-kolikoly lasa andrim-panjakana. Ao amin'ny lahatsorany “Momba ny kolikoly goavana ao Kenya“, nanamarika izy fa tsy ampy ny lazaina momba ny ‘toe-javatra ankapobeny’. Manome fanadihadiana antsipirihany sy lalina momba ny kolikoly izy avy eo, ary tafiditra ao anatin'izany ny fandinihany momba ny fanabeazana olom-pirenena, “Ny tena marina dia mamaly ireo ahiahy tsotra kokoa ny mpifidy raha mikasika ny foko, ny laza, ny tahotra, sns izany. (tsy any Kenya ihany, ahoana ny fomba hanazavanao ny teny roan'i George Bush?) “hoy koa izy
… tokony hisy ezaka tsara kokoa amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny kolikoly eo amin'ny fiainany andavanandro. Amin'izao fotoana izao satria nabaribarinao hoe ohatrinona ny vola lany tamin'ny fiara raitra, aminao, inona marina no dikan'ny hoe mitondra S-500 Merc ny “solombavambahoakanareo bendera”?
Mentalacrobatics maneho ny fihetseham-pon'ny iray amin'ireo Keniana tao amin'ny lahatsarin'ny BBC.
Teo amin'ny antsasakadiny tamin'ny lahatsarin'ny tatitry BBC niarahana tamin'i Githongo, nihaona tamin'ny lehilahy iray ny ekipan'ny fahitalavitra, lehilahy nilaza tamin'izy ireo hoe: “Ny safidiko no fitaovam-piadiako fantatro izay [ho ampiasaiko] amin'ny fifidianana ankapobeny manaraka. Hatsipiko izy ireo.” Amena. Tsy mila basy sy milisy hiaro antsika, manana ny fahefana rehetra ilaiko aho amin'ity kara-pifidianana ity.
Manome ohatra sasantsasany koa izy hanehoana ny fiovan'ny toe-tsain'ny Kenyana manoloana ny politika.
Tokony hiahiahy ireo politisiana any Kenya amin'izao fotoana izao satria toa ny firenena iray manontolo no nianatra endrika poker [mahay mamitaka] sy ny tsiky hosoka. Nianatra ny fomba fanaovana politika izahay. Azonay atao ny milaza zavatra iray aminareo ary mivoaka sy manao zavatra hafa tanteraka. Tokony hitandrina ireo politisiana mahira-tsaina satria nahatakatra ny anjara andraikitray ao anatin'ity raharaha demaokrasia ihany izahay vahoaka, miasa ho anay ianareo. Arakaraka ny hahatakaranao izany vetivety, no mahatsara izany kokoa.
Whispering Inn manome antony efatra mahatonga ny antony tsy hiheverany fa maro no hiova aorian'ny fifidianana 2007, ary nilaza hoe “aza manantena fiovana“
Magaidi rants (lela ao amin'ny takolaka) milaza hoe “mila kenyan git-mo isika” isika mba handraisana ireo olon-tsotra mpanao kolikoly avy amin'ny raharaha ratsy Anglo sy goldenbert.
Kenyan Analyst mijery ny tantara ratsy amin'ny lafiny mivelatra kokoa, ao amin'ny lahatsoratra “Githongo ilay lehilahy sy ireo tsiambaratelo”, mihevitra izy hoe “Tsy isalasalana fa manana ny tombontsoany manokana (antsoin'izy ireo matetika hoe “tombontsoa manokana mazava”) ny Britanika sy ny hafa. .. “Mampitaha ny tantaran'i githongo sy ny raharaha watergate izy izay ahatsapany fa misy antony hafa koa ao.
Bankelele kosa mampitaha fa somary anatin'ny tantara Anglo Leasing ny tolotra finday avy amin'ireo mpamatsy tolotra ambony any Kenya, Safaricom Vs Celltel, ao anaty lahatsoratra. Nanipika izy fa “Ny andro taorian'ny nialàn'ny Minisitry ny Tetibola, David Mwiraria, nitatitra ny gazety People fa iray tamin'ireo nahatonga ny fialàny ny masoivoho amerikana tao Nairobi izay nanamarika fa tsy hanome visa ho azy hitarika ny delegasiona Kenyana ho any Washington DC hanatrika ny resadresaka ataon'ny Banky Iraisam-pirenena amin'ny volana Febroary izy. “
Araka ny hitanao, tantara tena mahatsikaiky ny raharaha Anglo leasing, mba hanarahana ny fivoaran-draharaha, tsidiho ny KenyaUnlimited, angona bilaogy Kenyana.
Raha mampaha-fanina anao ny raharaha anglo leasing, dia manana andian-tsary mahafinaritra misy ny toeram-pambolen'ny fianakaviany i Adrian ao amin'ny lahatsoratra Bean harvest in Loitokitok [fitangosan-tsaramaso ao Loitokitok] .